Nyowani Continental Tourism Mubairo Yakapihwa neAfrican Tourism Board
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Nyowani Continental Tourism Mubairo Yakapihwa neAfrican Tourism Board
Kufamba kwekushanya • African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Awards • Botswana Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ethiopia Kupwanya Nhau • Ghana Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Nigeria Breaking News • vanhu • Qatar Kuputsa Nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
African Tourism Board Continental Tourism Mubairo
Mukucherechedza basa rakanaka rakaitwa nevatungamiriri vehurumende yeAfrica nevamwe vanhu vakakosha mukusimudzira nekusimudzira kwekushanya muAfrica, African Tourism Board (ATB) yakapa iyo Continental Tourism Awards kune vamwe vatungamiriri vayo.
Pasi pechisungo cheATB, vamiriri vanobva kunze kweEast Africa vakapinda muExppo. Pakati pavo paive nevamiriri vanobva kuEthiopiya, Botswana, Nigeria, Ghana, neQatar.
Iyo Continental Tourism institution yakapihwa mibairo kuhunhu hwakakosha muAfrica vanomira kumashure kwekusimudzirwa kwekushanya nekubudirira.
Iwo maAtB Continental Awards akaunzwa kune hunhu kubva kumatunhu ese eAfrica.
Wekutanga akagashira ATB's Continental Tourism Awards 2021 aive Mutungamiriri weTanzania, Samia Suluhu Hassan, mukuremekedza kuzvipira kwake kusingaperi uye mupiro wekusimudzira nekusimudzira kushanya kweTanzania.
Mharidzo yeizvi African Tourism Bhodhi (ATB) mibairo yakaitika neMugovera panguva yekuvhurwa zviri pamutemo kweFirst East African Regional Tourism Expo (EARTE) iri kuitirwa kuchamhembe kweTanzania guta revashanyi reArusha.
Mutungamiri akatungamira mukunyora zvinyorwa zveRoyal Tour inosanganisira Tanzania zvinokwezva vashanyi, pakati pezvimwe zvirongwa zvakatorwa neMutungamiri kusimudzira kusimudzira kwekushanya muTanzania neAfrica.
Iyo African Tourism Board inosungirwa kusimudzira uye kufambisira mberi kukura kwekushanya pamwe nekusimudzira mudunhu rese.
Vachipa mubairo wavo wekuremekedza kuna Mutungamiriri weNyika weTanzania, Sachigaro weATB VaCuthbert Ncube, vakati mutungamiri weTanzania aona kuti indasitiri yekushanya yakwira mukati megwara reCOVID-19.
Gurukota rezvezvisikwa nekushanya muTanzania, Dr Damas Ndumbaro, vakagashira mubairo uyu vakamirira Mutungamiriri.
Vamwe vakaremekedzwa vanogashira maAfrican Tourism Board maE Continental Awards 2021 vaive Gurukota rezveKushanya neKutsika muSierra Leone, Dr. Memunatu Pratt, aive mumwe wevanhu vakakosha vakapinda EARTE kubva kunze kwenyika yeEast Africa Community (EAC).
Mushure mekugamuchira mubairo uyu, Dr. Pratt vakati vakafadzwa kutora chikamu muEARTE uye vakafara kuona akawanda akadaro mashoo ekushanya muAfrica. Iye achatumira mazano kuWest Africa nyika kuti vatange kuratidzira kwakafanana kwekushanya.
Vamwe vakagashira pamusoro mibairo yeATB vaive Gurukota rezvezvisikwa nekushanya kuTanzania, Dr.Damas Ndumbaro; Va Najib Balala, Gurukota rezveKushanya kuKenya; VaMoses Vilakati, Gurukota rezveKushanya kuHumambo hweEswatini; uye Gurukota rezvekushanya muBotswana, Philda Kereng.
Chirongwa chegore negore cheEECC Regional Tourism Expo chakatanga neMugovera, Gumiguru 9, chichimhanya kusvika nhasi, Gumiguru 11. Vatori vechikamu vari kupihwa mukana wekushanyira nzvimbo dzakakosha dzekushanya muTanzania kusvika Gumiguru 16, kusanganisira zvinofarirwa nemhuka dzesango.
Iyo Regional Tourism Expo, yekutanga yerudzi rwayo, yakaitirwa mudunhu reEast Africa, yakanangana nekusimudzira zvinokwezva zvekushanya zvinowanikwa munyika dziri nhengo dzeEEC dzeTanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, neSouth Sudan.